न्यूरोसर्जन समाजको अध्यक्षमा डा. प्रवीण श्रेष्ठ चयन – Health Post Nepal
२०७८ माघ ३ गते १३:५३
काठमाडौं – नेपाल न्यूरोसर्जन समाजको नयाँ कार्यकारी समिति चयन भएको छ। समाजको साधारणसभाले समितिको अध्यक्षमा वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डा. प्रवीण श्रेष्ठलाई चुनेको छ। यस्तै महासचिवमा डा. सुदन ढकाल चयन भएका छन्।
यस्तै अन्य पदहरुमा प्रेसिडेन्ट इलेक्ट (भावी अध्यक्ष) मा डा. यम बहादुर रोका, उपाध्यक्षमा डा. अमित थापा, कोषाध्यक्षमा डा. सुरज थुलुङ्ग, सहसचिवमा डा. अमित प्रधानाङ्ग र डा. चन्द्र प्रकाश लिम्बु तथा सदस्यहरुमा डा. माया भट्टचन, डा. प्रकाश काफ्ले, डा. नरेन्द्र शालिखे, डा. रबिन भट्टराई, डा. सफ्रोज अन्सारी र डा. सागर कोइराला चुनिएका छन्।
सन् २००७ मा स्थापना भएको समाजको वर्तमान कार्यकारी समिति सातौं हो। यसभन्दा अघि स्वर्गीय डा. उपेन्द्रप्रसाद देवकोटा संस्थापक तथा पहिलो अध्यक्ष थिए भने उनीपछि क्रमश: डा. पवन सुल्तानिया, डा. बसन्त पन्त, डा. गोपाल रमण शर्मा, डा. मोहन शर्मा र डा. कृष्ण शर्मा अध्यक्ष थिए।
डा प्रवीण श्रेष्ठ समाजमा सुरुदेखि नै सक्रिय रही कार्यकारी सदस्य, सहसचिव, महासचिव, प्रेसिडेन्ट इलेक्ट हुँदै अध्यक्ष बनेका हुन्।